တရုတျနိုငျငံတှငျ ဒေါကျတာဘှဲ့သငျကွားနသေူခငျြးကြောငျးသားတဈဦးအာား လကျရှိမွပွေငျအနအေထား အပျေါမေးမွနျးခွငျး - Chin World
Home Chin တရုတျနိုငျငံတှငျ ဒေါကျတာဘှဲ့သငျကွားနသေူခငျြးကြောငျးသားတဈဦးအာား လကျရှိမွပွေငျအနအေထား အပျေါမေးမွနျးခွငျး
လကျရှိတရုတျပွညျရဲ့ ဝူဟနျ မှာဖွဈပှားနတေဲ့ conorus virus ကွောငျ့ မွနျမာကြောငျးသား ၆၀ ကြျောကို ဆေးစဈပွီး မွနျမာပွညျကို ပွနျပို့ဆောငျဖို့ နှဈဖကျနိုငျငံက ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ မွနျမာကြောငျးသား ၆၀ ကြျောထဲမှာ ဒေါကျတာဘှဲ့တကျရောကျနကွေတဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား (၅) ပါဝငျနပေါတယျ။ အဲဒီခငျြးကြောငျးသားတှထေဲက ကလေးတက်ကသိုလျဆရာတဈဦး ဖွဈပွီး Central China Normal University မှာ ရုက်ခဗဒေ ဒေါကျတာဘှဲ့ကို သငျယူနတေဲ့ ဆရာဗနျဗကျြလှယျကို လကျရှိမွပွေငျအနအေထား၊ မွနျမာကြောငျးသားမြား၏ အခွအေနတှေကေို မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး – Salai C.Lian
မေး။ ။ လကျရှိတရုတျပွညျမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ Conorus virus ကိစ်စက အတျောလေးအခွအေနဆေိုးနတေယျလို့ သိရတယျ။ မွနျမာပွညျကနေ ကြောငျးသှားတကျနတေဲ့သူတှေ အခွအေနေ ဘယျလိုရှိလဲဗြ?
ဖွေ။ ။ အရငျဆုံးအနနေဲ့ ဒသေအသီးသီးကနေ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေ သတိသယနဲ့ ဆုတောငျးပေးကွတဲ့အပျေါ ကြေးဇူးတငျတယျလို့ အရငျဆုံးပွောလိုပါတယျ။ ခုဖွဈနတေဲ့ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျောတို့ လကျရှိအခွအေနကေတော့ ဘာမှထူးခွားမှုမရှိသေးဘူး၊ ပုံမှနျအတိုငျးရှိနပေါသေးတယျ။
မေး။ ။ မွနျမာကြောငျးသားတှေ ပွနျလာဖို့ အစိုးရနှဈဖကျညှိနှိုငျးနတေယျလို့လဲသိရတယျ။ ဘာထူးခွားမှုရှိပွီလဲ။
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ကတော့ဘာမှ လုပျနိုငျတာ မရှိဘူး၊ အစိုးရ အခငျြးခငျြး ဆကျသှယျပွီး လကျရှိအခွအေနကေို လလေ့ာသုံးသပျနကွေတယျ၊ ဒါပမေဲ့ တာဝနျရှိတဲ့ အစိုးရပိုငျးကတော့ သူတို့တဈစုံတဈရာ ဘာမှပွောဆိုတာ၊ အသိပေးတာ၊ ကွငွောတာမရှိသေးဘူး၊ သူတို့ကိုပဲ ကြှနျတျောတို့ စောငျ့နကွေတယျ။
မေး။ ။ တရုတျအခွစေိုကျ မွနျမာသံရုံးကတော့ မွနျမာကြောငျးသားတှနေဲ့အဆကျမပွတျဆကျသှယျပွီး အစားအသောကျတှလေညျး သကျဆိုငျရာနဲ့ညှိနှိုငျးပွီး ပေးပို့ထားတယျဆိုပွီး ထုတျပွနျခကျြထုတျတဲ့အပျေါမှာကော။
ဖွေ။ ။ စားရေးသောကျရေး အခကျမခဲမရှိစရေနျ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညိုနိုငျးဆောငျရှကျပေးတယျ ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကြှနျတျောတို့ဆီမရောကျသေးတာလား မသိဘူး၊ ဘာတဈခုမှ အသိပေးတာလဲမရှိသေးဘူး၊ ကွားလဲမကွာသေးဘူး။
မေး။ ။ ကနျြးမာရေးစိစဈပွီး မွနျမာပွညျပွနျချေါနိုငျဖို့ အစိုးရနှဈဖကျ ညှိနှိုငျးနတေယျဆိုတဲ့အပျေါမှာကော?
ဖွေ။ ။ မွနျမာပွညျကို ပွနျမပွနျဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဘာမှပွောလို့မရသေးဘူး၊ ဘာမှလညျး ပွောဆိုပိုငျခှငျ့မရှိဘူး၊ ကိုယျ့နိုငျငံကိုယျ့ဒသေ၊ ကိုယျ့မိသားစု ဆှမြေိုးတှနေဲ့တော့ အကုနျလုံးနခေငျြကွတာပေါ့၊ ဒါပမေဲ့ ဘယျတကျနိုငျမလဲ။
မေး။ ။ ဆရာ့အနနေဲ့ တဈခွားကြောငျးမှာ တကျနတေဲ့ မွနျမာပွညျက ကြောငျးသား/သူ အခွအေနသေိသလောကျလညျးပွောပွပေးပါအုံး။
ဖွေ။ ။ မွနျမာပွညျကနေ ကြောငျးလာတကျတဲ့ ကြောငျးသူ/သား အခွအေနကေတော့ အကုနျလုံးတူနတေယျ၊ ဒါပမေဲ့ တဈခြို့ကြောငျးတှကေတော့ ကြောငျးကပဲ ထမငျးကြှေးပေးကွတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ ကြောငျးမှာကတော့ အခုထိ အဲလိုလုပျပေးတာ မရှိသေးဘူး၊ ဝူဟနျ မှာနတေဲ့ ကြောငျးသူ/သားတှကေတော့ အခုထိတော့ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ နထေိုငျကွတယျ၊ ကြောငျးအပွငျကိုတော့ ထှကျခှငျ့မပေးကွဘူး၊ အခြို့ကြောငျးတှမှောဆိုရငျ သူတို့နတေဲ့ အဆောငျကနတေောငျ ထှကျခှငျ့မပေးကွဘူး၊ အဲလိုပဲ ကြှနျတျောတို့လဲ ကိုယျ့ခနျးထဲမှာပဲ နကွေတယျ။
မေး။ ။ ဆရာတို့ကြောငျးမှာ ခငျြးလူမြိုး ဘယျနှယောကျရှိလဲ၊ ပွီးတော့ မွနျမာပွညျဘကျကရော တဈခွားတိုငျးရငျးသား ဘယျနှယောကျရှိကွလဲ
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောတို့ ကြောငျးမှာကတော့ ခငျြးလူမြိုး ၃ ယောကျရှိတယျ၊ မွနျမာပွညျကဆိုရငျတော့ ၂၁ ယောကျရှိတယျ၊ တဈခြို့တှကေ ကြောငျးပိတျရကျအတှငျး မွနျမာပွညျကို ပွနျကွတယျ၊ အကုနျလုံးပေါငျးရငျတော့ ၃၉ ယောကျရှိတယျ၊ အခုမပွနျတဲ့သူတှကေတော့ ကြောငျးပွီးမယျ့သူတှရေယျ Experiment လုပျမယျ့သူတှပေဲ ကနျြတော့တယျ။
မေး ။ ။မွနျမာပွညျကဖကျကနေ တရုတျနိုငျငံမှာ ကြောငျးသှားတကျတဲ့သူတှအေတှကျ အလှနျစိတျပူကွတယျ၊ အဲအပျေါတဈခုခုပွောပွပေးစလေိုပါတယျ။
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောတို့ ပွနျလာမယျဆိုရငျလညျး နှဈဖကျအစိုးရရဲ့ အသိအမှတျပွုတဲ့ ကနျြးမာရေး စိစဈမှုကို ခံယူမယျ၊ အဲတာအောငျမှသာ လာပွနျနိုငျမယျ၊ အဲဒါထကျ ပိုဆိုးရှားတာက အခုအစိုးရဲ့ တရားဝငျမဟုတျတဲ့ ခိုးပွီး တရုတျနိုငျငံကနေ မွနျမာနိုငျငံကို ဝငျလာတဲ့သူ အမြားကွီး ရှိနပွေီ၊ အဲဒါတှကေ ပိုကွောကျစရာ ကောငျးတယျ၊ ဥပမာ ပွောရရငျ တဈခြို့လဆေိပျရှိတဲ့ နရောတှပေေါ့ (ရနျကုနျ၊ မန်တလေး၊ နပွေညျတျော) နဲ့ နယျစပျဖွဈတဲ့ ရှလေီတို့အတှကျ ပိုပွီး သတိထားဖို့ အရမျးလိုအပျနတေယျ၊ ကြှနျတျောတို့ကတော့ လာပွနျရငျလညျး အစိုးရနှဈဖကျက ခှငျ့ပွုမှသာ လာပွနျမယျ။ အှနျလိုငျးက သတငျးအမြားတှကေို အကုနျမယုံပဲ ကိုယျနထေိုငျရာအရပျမှာ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ ဂရုစိုကျကွဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
လက်ရှိတရုတ်ပြည်ရဲ့ ဝူဟန် မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ conorus virus ကြောင့် မြန်မာကျောင်းသား ၆၀ ကျော်ကို ဆေးစစ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့ဆောင်ဖို့ နှစ်ဖက်နိုင်ငံက ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသား ၆၀ ကျော်ထဲမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့တက်ရောက်နေကြတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား (၅) ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒီချင်းကျောင်းသားတွေထဲက ကလေးတက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး Central China Normal University မှာ ရုက္ခဗေဒ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို သင်ယူနေတဲ့ ဆရာဗန်ဗျက်လွယ်ကို လက်ရှိမြေပြင်အနေအထား၊ မြန်မာကျောင်းသားများ၏ အခြေအနေတွေကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး – Salai C.Lian
မေး။ ။ လက်ရှိတရုတ်ပြည်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Conorus virus ကိစ္စက အတော်လေးအခြေအနေဆိုးနေတယ်လို့ သိရတယ်။ မြန်မာပြည်ကနေ ကျောင်းသွားတက်နေတဲ့သူတွေ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲဗျ?
ဖြေ။ ။ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ဒေသအသီးသီးကနေ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေက သတိသယနဲ့ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့အပေါ် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ အရင်ဆုံးပြောလိုပါတယ်။ ခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအခြေအနေကတော့ ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးဘူး၊ ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပါသေးတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာကျောင်းသားတွေ ပြန်လာဖို့ အစိုးရနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လဲသိရတယ်။ ဘာထူးခြားမှုရှိပြီလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကတော့ဘာမှ လုပ်နိုင်တာ မရှိဘူး၊ အစိုးရ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်နေကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရပိုင်းကတော့ သူတို့တစ်စုံတစ်ရာ ဘာမှပြောဆိုတာ၊ အသိပေးတာ၊ ကြေငြာတာမရှိသေးဘူး၊ သူတို့ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ စောင့်နေကြတယ်။
မေး။ ။ တရုတ်အခြေစိုက် မြန်မာသံရုံးကတော့ မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြီး အစားအသောက်တွေလည်း သက်ဆိုင်ရာနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး ပေးပို့ထားတယ်ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တဲ့အပေါ်မှာကော။
ဖြေ။ ။ စားရေးသောက်ရေး အခက်မခဲမရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညိုနိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမရောက်သေးတာလား မသိဘူး၊ ဘာတစ်ခုမှ အသိပေးတာလဲမရှိသေးဘူး၊ ကြားလဲမကြာသေးဘူး။
မေး။ ။ ကျန်းမာရေးစိစစ်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အစိုးရနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကော?
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်မပြန်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူး၊ ဘာမှလည်း ပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ဒေသ၊ ကိုယ့်မိသားစု ဆွေမျိုးတွေနဲ့တော့ အကုန်လုံးနေချင်ကြတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။
မေး။ ။ ဆရာ့အနေနဲ့ တစ်ခြားကျောင်းမှာ တက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသား/သူ အခြေအနေသိသလောက်လည်းပြောပြပေးပါအုံး။
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည်ကနေ ကျောင်းလာတက်တဲ့ ကျောင်းသူ/သား အခြေအနေကတော့ အကုန်လုံးတူနေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ကျောင်းတွေကတော့ ကျောင်းကပဲ ထမင်းကျွေးပေးကြတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှာကတော့ အခုထိ အဲလိုလုပ်ပေးတာ မရှိသေးဘူး၊ ဝူဟန် မှာနေတဲ့ ကျောင်းသူ/သားတွေကတော့ အခုထိတော့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ နေထိုင်ကြတယ်၊ ကျောင်းအပြင်ကိုတော့ ထွက်ခွင့်မပေးကြဘူး၊ အချို့ကျောင်းတွေမှာဆိုရင် သူတို့နေတဲ့ အဆောင်ကနေတောင် ထွက်ခွင့်မပေးကြဘူး၊ အဲလိုပဲ ကျွန်တော်တို့လဲ ကိုယ့်ခန်းထဲမှာပဲ နေကြတယ်။
မေး။ ။ ဆရာတို့ကျောင်းမှာ ချင်းလူမျိုး ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ဘက်ကရော တစ်ခြားတိုင်းရင်းသား ဘယ်နှယောက်ရှိကြလဲ
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှာကတော့ ချင်းလူမျိုး ၃ ယောက်ရှိတယ်၊ မြန်မာပြည်ကဆိုရင်တော့ ၂၁ ယောက်ရှိတယ်၊ တစ်ချို့တွေက ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကြတယ်၊ အကုန်လုံးပေါင်းရင်တော့ ၃၉ ယောက်ရှိတယ်၊ အခုမပြန်တဲ့သူတွေကတော့ ကျောင်းပြီးမယ့်သူတွေရယ် Experiment လုပ်မယ့်သူတွေပဲ ကျန်တော့တယ်။
မေး ။ ။မြန်မာပြည်ကဖက်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်တဲ့သူတွေအတွက် အလွန်စိတ်ပူကြတယ်၊ အဲအပေါ်တစ်ခုခုပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်း နှစ်ဖက်အစိုးရရဲ့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ကျန်းမာရေး စိစစ်မှုကို ခံယူမယ်၊ အဲတာအောင်မှသာ လာပြန်နိုင်မယ်၊ အဲဒါထက် ပိုဆိုးရွားတာက အခုအစိုးရဲ့ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ခိုးပြီး တရုတ်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာတဲ့သူ အများကြီး ရှိနေပြီ၊ အဲဒါတွေက ပိုကြောက်စရာ ကောင်းတယ်၊ ဥပမာ ပြောရရင် တစ်ချို့လေဆိပ်ရှိတဲ့ နေရာတွေပေါ့ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်) နဲ့ နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ ရွှေလီတို့အတွက် ပိုပြီး သတိထားဖို့ အရမ်းလိုအပ်နေတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လာပြန်ရင်လည်း အစိုးရနှစ်ဖက်က ခွင့်ပြုမှသာ လာပြန်မယ်။ အွန်လိုင်းက သတင်းအများတွေကို အကုန်မယုံပဲ ကိုယ်နေထိုင်ရာအရပ်မှာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဂရုစိုက်ကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Previous post မီဇိုရမျပွညျနယျတှငျ အမြိုးသား ပွညျ့တနျဆာ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကွားရှိဟုဆို
Next post ဦးဝမ်မသူးမောငျးပနျခွံကို အစိုးရထောကျပံ့ငှမေပါသေးပဲ အလှူငှမြေားဖွငျ့ လုပျငနျးဆကျလုပျလကျြရှိ
တှနျးဇံမွို့နယျ ခငျမနျးကြေးရှာတှငျ နယျစပျဈေးဖှငျ့လှဈရနျ စီစဉျလကျြရှိပွီး ကနျြလေးနရောအတှကျလညျး အိန်ဒိယနှငျ့ညှိနှိုငျးနေ